Madasha Xisbiyada Qaran oo warqad walaac ay NISA ka qabaan u diray Madaxda Dalka | XORRIYA NEWS
Home Wararka Madasha Xisbiyada Qaran oo warqad walaac ay NISA ka qabaan u diray...
Madasha Xisbiyada Qaran oo warqad walaac ay NISA ka qabaan u diray Madaxda Dalka
Qoraalka Warqada ayaa lagu muujiyay shaki ah in xiriir iyo iskaashi ka dhaxeeya Hey’adda NISA iyo Al-Shabaab.
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa qoraal warqad ah u direen Madaxweyne Farmaajo, Ra’iisul Wasaare Kheyre, Guddoomiyeyaasha Labada Aqal iyo Xeer Ilaaliyaha Qaranka ayaa lagu muujiyay walwal aad u balaaran oo ku saabsan warbixino iyo xogo dhowaan la soo saaray oo sheegaya in xiriir iyo iskaashi uu ka dhaxeeyo Hey’adda NISA iyo Al-Shabaab.
Warqadan oo ku taarikheysan 19 April ayaa ciwaan looga dhigay Warqad Sir ah, iyadoo xiriir aanu la sameynay Madasha Xisbiyada ay inoo xaqiijiyeen jiritaanka warqada, balse aanay dhankooda ka bixin warqada ay u direen dhinacyada ay ku socodsiiyeen ee Madaxda Qaranka iyo Xeer ilaalinta.
Madasha ayaa illaa shan qodob u soo jeediyay Madaxda ay warqada u direen sida in baaritaan madax bannaan oo degdeg lagu sameeyo dilkii Guddoomiyihii hore Gobolka Banaadir Allaha u naxariistee Eng. C/raxmaan Yariisow oo weerar ka dhacay Xarunta Gobolka Banaadir 24 bishii July uu ku dhaawacmay dabadeedna 1 Agosto dhaawici soo gaaray u geeriyooday.
Sidoo kale in baaritaan lagu sameeyo qoraalo laga sawiray WhatsApp oo la sheegay inuu ahaa wada shakeysi dhex maray Sarkaal ka tirsan NISA iyo Al-Shabaab, inkastoo warkaas oo ay qoreen Warbaahinta Kenya ay dowladda Soomaaliya beenisay.
Madasha Xisbiyada ayaa u soo jeedisay Madaxda ay warqada ku socodsiisay in Hoggaanka NISA laga fogeeyo Siyaasiyiinta leh ujeedooyinka siyaasadeed, loona dhiibo farsamayaqaano ku xeel dheer Sirdoonka iyo Amniga Qaranka oo macnaheedu yahay in laga qaado xilka Fahad Yaasiin Taliyaha Hey’adda NISA.
Sidoo kale waxaa ay sheegeen in warbaahinta baraha bulshada NISA, gaar ahaan Twitterka aan loo isticmaalin meel lagu fushado dano gaar ahz laguna marin habaabiyo ra’yi Shacabka, laguna buunbuuniyo xubno ka tirsan Al-Shabaab, iyagoo laga leeyahay dano khaas ah.
Madasha ayaa soo qaadatay warbixinadii dhowaan ay daabaceyn Wargeysyo laga leeyahay dalka Kenya oo markii damba la ogaaday inay been abuur yihiin qoraaladooda.
Halkan hoose ka akhriso Warqada Madasha:-